पुलिसले लियो भैँसीको बयानः सोध्यो- तिम्रो मालिक को हो र ? – दैलो न्युज । न्याय र समानताको संवाहक
पुलिसले लियो भैँसीको बयानः सोध्यो- तिम्रो मालिक को हो र ?
माघ २६, २०७३ १२:२९ मा प्रकाशित
पुलिसको काम नै अपराधीको बयान लिने हो । तर भारतको पुलिस भने अलिक अगाडि रहेछ यस मामिलामा । कहिले कुखुरालाई जेलमा थुन्ने त कहिले भैँसीलाई अदालतमा उपस्थित गराउने । अनि यसपटक भारतीय पुलिसले भैँसीको बयान लिएर अर्को कीर्तिमान कायम गरेको छ ।
केही समयअघि भारतको हरिद्धारमा एक भैँसीमाथिको स्वामित्वको विवाद पुलिसकोमा पुग्यो । उक्त भैँसी आफ्नो भनेर दुईजना मानिसले दाबी गरेपछि पुलिसलाई भैँसीको मालिक को हो ? भनेर छुट्टाउन सकस भयो ।
जुल्फिकारसँग कुरा गर्दासमेत रमेशले भैँसी किनेको तथ्य सही ठहरियो । भैँसी त किनेको हो, तर किनेको भैँसी चाहीँ त्यो हो कि होइन भन्ने कुरा छुटि्टएन । यस्तो अवस्था आएपछि पुलिसले एक जुक्ति निकाल्यो ।आखिर दुई झगडीया सचिन र रमेशले दाबी नछाडेपछि पुलिसले भैँसीको खास मालिक को हो रु भनेर फैसला गर्ने जिम्मा भैँसीलाई नै दियो । सचिनले आफ्नो भैँसी हराएको र हराउनेबित्तिकै पुलिसकोमा उजुरी दिएको भन्यो । उता रमेशले भने आफूसँग भएको उक्त भैँसी सचिनको हराएको भैँसी नभइ आफूले जुल्फिकार नामक व्यापारीसँग किनेको दाबी गर्‍यो ।